ဘေးဘလော့စ်မြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
လက်ဘနွန်နိုင်ငံ မှ လက်ဘနွန်တောင် ပေါ်ရှိ တောင်ပေါ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါသည်
ဘေးဘလော့စ်မြို့ အား ဒေသအတွင်းတွင် ဂျေဘေးမြို့ ဟု ခေါ်ကြပြီး ထရီပိုလီကောင်တီ အတွင်းတွင် ဂျေးဘလက် ဟု ခေါ်ကြကာ လက်ဘနွန်နိုင်ငံ မောင့်လက်ဘနွန်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်သည်။ ထိုမြို့တွင် ဘီစီ ၈,၈၀၀ နှင့် ၇,၀၀၀ ကြားကပင် စတင်၍ လူများ နေထိုင်ကြသည်ဟု ယုံကြည်ကြပြီး ဘီစီ ၅,၀၀၀ ခုနှစ်ကတည်းက ယခုတိုင် လူတို့ နေထိုင်ကြသဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ယနေ့တိုင် လူတို့နေထိုင်ကြသော ရှေးအကျဆုံး နေရာများတွင် တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ယူနက်စကို မှ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။
၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၂ စတုရန်းမိုင်)
၁၇ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၇ စတုရန်းမိုင်)
↑ Garfinkel, Yosef (2004)။ ""Néolithique" and "Énéolithique" Byblos in Southern Levantine Context"။ in E. J. Peltenburg; Alexander Wasse (eds.)။ Neolithic Revolution: New Perspectives on Southwest Asia in Light of Recent Discoveries on Cyprus။ Oxbow Books။ ISBN 978-1-84217-132-5။ 18 January 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dumper၊ Michael; Stanley၊ Bruce E.; Abu-Lughod၊ Janet L. (2006)။ Cities of the Middle East and North Africa။ ABC-CLIO။ p. 104။ ISBN 1-57607-919-8။ 22 July 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archaeological excavations at Byblos indicate that the site has been continually inhabited since at least 5000 B.C.
↑ "The world's 20 oldest cities"၊ 30 May 2017။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘေးဘလော့စ်မြို့&oldid=507650" မှ ရယူရန်
၂၃ မတ် ၂၀၂၀၊ ၀၇:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ မတ် ၂၀၂၀၊ ၀၇:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။